June 2018 – Page 2 – siifsiin
TOBAN TORBANIIN QARSHII
Gaaf tokko jaartiin qoraan barbaada gara dhaqxtee otuu bosona keessa naannoftuu qeerransa du'aa argite. Hoggaa kana ariitii dhaan daddaftee mi'a (meeshaa) barbaaddee gogaa irraa baaftee gurguratte. Garbittiin gaafa masqalaa bitamte borus masqala jetti akkuma jedhamutti ammas torban tokko booda bosonuma sana keessatti deebitee qeerransa du'e otoo barbaadduu tokko kan ciisu argite. Akkuma kaanduraanii ni du'e … Continue reading TOBAN TORBANIIN QARSHII
Haaddu(Albee) sii qareettu naa morode
Dur durii addurreefi hantuutatu walii wajjiin taphattu turani. Gaaf tokko otoo walii wajjiin taphachaa jiranii (oolani) galgala galanii haadha isaanii addurreen wanta qal'oo egee ishee dheeraa tokko wajjiin taphachan oole jettee haadha isheetti himte jennaan haatii ishee boruu nuu fidii koottu jettee ilmoo isheetti himte. Haati hantuutas ilmoo ishee wanta adii, bareedduu tokko wajjiin tapachaan … Continue reading Haaddu(Albee) sii qareettu naa morode
Guyyaa tokko Mootiin Akkoo Manooyyee jedhamtu, uummata walitti qabdee “lafaa fi waaqa gidduutti mana naaf ijaaraa” jettee murtoo dabarsite, uummannis ajajni kun itti ulfaatee mala dhahuutti ka'an. Guyyaa birra ofitti waamatnii, “abbaatu utubaa dhaabbate kottu utubaa nuuf dhaabi” jedhani. Isheenis utubaa dhaabu waan hin dandaanyeef dhiisaa haa hafuu jette jedhama.